PSJTV | उपनिर्वाचनको भोलिपल्टै किन पश्चिम भ्रमणमा जाँदैछन् पूर्वराजा?
९ मंसिर, काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको भ्रमणमा निस्किन लागेका छन्। उनी यही मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको भोलिपल्टदेखि पश्चिमाञ्चल भ्रमणमा निस्किन लागेका हुन्।
जिल्लाका राजावादीको निम्तो मान्न र विभिन्न मठमन्दिरको दर्शन गर्न उनी पश्चिम भ्रमणमा निस्किन लागेको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ। मंसिर १५ गते बिहान बुद्ध एयरको जहाजबाट भैरहवा प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। करिब २ साता लामो भ्रमणका क्रममा उनले करिब आधा दर्जन जिल्ला भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको निर्मल निवास स्रोतले जानकारी दिएको छ।
पछिल्लो समय डिस्कोमा पुगी रातो र चन्द्र सूर्य गीतमा नाचेर चर्चा कमाएका शाहको मुख्य अजेन्डा जिल्लाका आफू निकटका नेता कार्यकर्तासँग भेट गर्ने हो। उनले देशको पछिल्लो अवस्था र पूर्वराजाप्रति जनताको चाहना कस्तो छ भन्ने विषयमा सूक्ष्म जानकारी लिन पश्चिम भ्रमणमा निस्किन लागेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले आगामी ९ माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । आयोगले सोमबार सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेपछि अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा परामर्श ...
काठमाडौं : उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिने भएकी छन् । यही ४ पुसमा संसदको अध्यक्षता गरेकी उपसभामुख तुम्बाहाम्फे राजीनामा दिने तयारीमा जुटेको संसद सचिवालयका प्रेस विज्ञय शेखर अधिकारीले बताए । ...